Lucky Links Slots is a created by Just For the Wins along with the cooperation of Microgaming. Afaka miala foana eo amin'ny efijery ity slot manokana rehefa leo ny mahazatra voankazo milina sy mitady zava-baovao. Na izany aza, Mety hahatsapa ianao tsy fisian'ny tombony endri-javatra ity Casino slots finday, fa ny misy ireo dia handoa anareo ampy mba hahatonga ny andro.
Hahafantatra bebe kokoa momba Lucky Links slots lalao
Tsara vintana slots Links dia nilalao tamin'ny 5 miraingiraingy azon'ny ary 25 paylines izay mamela anao handresy amin'ireo faritra roa ireo izay avy any ankavia miankavanana sy avy any ankavanana miankavia koa. Mamela anao mba mihodina ny 10p ny £ 250 isan-kofehy ireny. Raha ny sary, ny lalao dia majorly volomparasy sy ny fahazavana mamirapiratra seho toa ho fitaomam-panahy avy amin'ny trano filokana ny Fremont Street.
Ny marika izay ho tsikaritrao eo amin'ny reels fa natao toy ny karatra hafa soatoavina ny fo, fikambanana, angady sy ny diamondra. Ankoatra ireo, hafa izay nalaina avy amin'ny foto-kevitra dia natao toy ny 4-ravina clovers, mena telo 7s, kitron-tsoavaly sy ny acorns. Ny famantarana mariky ny Lucky Links no hanome anareo 7.5 fotoana ny tsatòka tanteraka ho azy ireo ka vao 5 isa manerana misy payline.
Araka ny voalaza teo aloha Bonus voa kelin'ny fangatahana Pixies slots azo niteraka ka vao ampy tambin fanehoana an'ohatra eo amin'ny reels. Io sitrapo loka anao maimaim-poana fito spins izay miakatra miaraka amin'ny fanitarana ny dikan-tenin'ny reels. Dia miraingiraingy azon'ny rehetra izao hiova fo ho in-droa ny haben'ny tany am-boalohany àry ny hanomezako anao amin'ny 50 paylines mba milalao miaraka amin'ny. koa, ny tampon-tanety mety hiseho eo amin'ny reels ihany koa. Ireo marika amin'izay hijanona eo ny varavarana lamba amin'ny endri-javatra rehetra izay ho azy dia mora kokoa ho anareo ny handresy. Getting tsara vintana amin'ny endri-javatra ity dia mety hanome anao ny sasany avo slot payouts ity.
Mety hitanao fa ny foto-kevitra tsy revo be, fa amin'ny ankapobeny, Voa kelin'ny fangatahana Pixies slots dia tsara tarehy lalao mba po ao. Afaka miditra foana izany Mobile Slots Casino isaky ny maniry ny hilalao miaraka amin'ny fiovana kely eo amin'ny gameplay miaraka mendrika mandoa slot.